कसरी एक केटाको कपाल काट्ने - उनको सबै चरणहरु पत्ता लगाउनुहोस् स्टाइलिश पुरुष
केटाको कपाल काट्ने यो एक चुनौती हुन सक्छ, तर केहि असम्भव छैन। धेरै आमा बुबाले आफ्ना बच्चाहरुको कपाल काट्ने, या त म्यानुअल तरिकाले सिक्न कैंची वा रेजर संग। अरूहरू सुरु गर्ने तरिका खोज्दैछन्, त्यसैले हामी केटाको कपाल कसरी काट्ने भनेर प्रस्ताव गर्न सक्छौं एक व्यावहारिक र निर्णायक तरीका मा।
बिन्दु हो, एक काम प्रभावी ढंगले गर्न को लागी, धैर्यता र निपुणतामा महारत हुनुपर्छ। सुरुमा यो महँगो हुन सक्छ कि कसरी पहिलो पटक गरिएको केहि काट्ने, तर समय संग यो प्रविधि यो धेरै सरल हुन सक्छ तपाईले कल्पना गर्नु भन्दा। यदि तपाइँ फेला पार्नुभयो कि यो तपाइँको कुरा होइन, तपाइँ सधैं तपाइँको काम एक पेशेवर को हात मा राख्न सक्नुहुन्छ।
1 केटाको कपाल काट्नु पर्छ?
2 कसरी एक बच्चाको कपाल कदम बाट कपाल काट्ने
3 रेजरको साथ कपाल काट्ने
केटाको कपाल काट्नु पर्छ?
एक बच्चाको कपाल काट्न तपाईलाई चाहिन्छ केही राम्रो तीखा कैंची। आदर्श कपाल काट्नको लागि विशेष हुनेछ, हातको आकारमा उपयुक्त, सानो र लम्बाई। पातलो तौलिया बच्चाको घाँटी र शरीरको वरिपरि बेर्नु पर्छ, ताकि झर्ने कपालले उसलाई सताउन नपरोस्।
काइँयो यो एक ब्रश भन्दा धेरै राम्रो हुनेछ, एक पानी स्प्रे ताकि यो कपाल मा सुक्खा र फ्याँक्न सकिन्छ कि हुन सक्छ अर्को तौलिया अतिरिक्त पानी हटाउन।
एक इलेक्ट्रिक रेजर कपाल काट्नको लागि कपाल काट्नको लागि पनि आदर्श हो। यसले सँधै कुनै पनि विवरणलाई अझ राम्रोसँग समाप्त गर्नेछ र तपाईंले काट्न चाहनुभएको सबै क्षेत्रहरूलाई दाढी गर्नेछ।
दिन को सबै भन्दा राम्रो समय को लागी हेर्नुहोस् क्रम मा आफ्नो कपाल काट्न को लागी, बच्चाहरु धेरै बेचैन हुन्छन् र हामी सधैं उनीहरुलाई सबै कुरामा विश्वस्त गर्न सक्दैनौं। बच्चा रिसाएको बेला यसो गर्ने प्रयास नगर्नुहोस्, रोइरहनुभएको छ वा केवल एक क्रोध, अन्त मा पल धेरै धेरै तनाव हुन सक्छ।
एउटा टिप बच्चालाई बुझाउन सक्षम हुनु हो तपाइँ रमाइलो समय बिताउन जाँदै हुनुहुन्छप्रतिक्षाको नतिजा र त्यो अझै छ यो यसको लायक हुनेछ। यदि उहाँ एक धेरै बेचैन बच्चा हो, तपाइँ उसलाई प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ केहि म संग मनोरन्जन गर्न सकिन्छ, एउटा सानो खेलौना, हास्य वा हाम्रो सूक्ष्म प्रविधिबाट। तर यस प्रकारको मनोरञ्जनलाई अन्तिम उपायको रूपमा दिनुहोस्, जब बच्चाले पर्खने बारे चिन्ता गर्न थाल्छ।
कसरी एक बच्चाको कपाल कदम बाट कपाल काट्ने
हामी आरामदायक ठाउँ छान्छौं जहाँ बच्चाको टाउको पर्याप्त उच्च छ जहाँ हामी उसको कपाल राम्रो संग काट्न सक्छौं। यो आदर्श छ कि तपाइँसँग छ टाउको धोएको र फलस्वरूप गीला। हामी एक तौलिया संग अतिरिक्त नमी हटाउनेछौं र हामी बच्चाको शरीरको वरिपरि अर्को तौलिया लपेट्नेछौं, यो घाँटी वरिपरि राखेर जोड दिनुहोस् ताकि कपाल गर्दनको बीचमा नआओस्।
हामी कपाल राम्रो संग कंघी गर्छौं ताकि यो पेचिलो छैन। हामी कपाल को माथिल्लो भाग संग शुरू हुनेछ, ताला द्वारा ताला लिने र छेउ काटेर। हामी सबै कपाल फिर्ता कंघी राख्छौं र हामी बीचमा एउटा रेखा चिन्ह लगाउँछौं। हामी टाउको को भाग तिर कंघी गर्छौं कि हामी काट्न सुरु गर्न जाँदैछौं।
vamos औंलाहरू बीचको कपालको टुक्रा उठाउँदै हातमा हात र कपाल ट्रिम। हामी सधैं औंलाहरू बीचको कपालको समान उचाइलाई सम्मान गर्नेछौं, ताकि सबै कुरा समान रूपमा समाप्त हुन्छ, तर हामी बिस्तारै काटिरहेका छौं।
हामी काट्नेछौं टाउकोको छेउबाट केन्द्र तिर र हामी उही आन्दोलन गर्न जाँदैछौं, औंलाहरु बीच कपाल लिदै र अतिरिक्त कपाल काट्दै। समाप्त भयो पक्षहरू समाप्त गर्दै र मुकुट र नाप को बीचको तल्लो भाग। यी क्षेत्रहरु कपाल को बाकी को तुलना मा एक धेरै कम स्तर हुनेछ र यस को लागी हामी आफैं बाट मद्दत गर्न सक्छौं रेजर को प्रयोग।
यो मात्र समाप्त गर्न बाँकी छ ब्याङ्गको भाग, साइडबर्न र नेप क्षेत्र। हामी यसलाई सिधा काट्ने कैंचीले गर्न सक्छौं, तर केही हदसम्म तिरछा। तपाईं पनि रेजर संग यो भाग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ कपालको टुक्रालाई कंघीले लिनुहोस्, यसलाई तल तिर घुमाउनुहोस् र रैखिक रूपमा बाँकी रहेको कपाल काट्नुहोस्। को लागी फ्रिन्ज क्षेत्र उस्तै गर्न सकिन्छ, तर त्यसपछि कैंची सानो कटौती र विभिन्न हाइट्स बनाउन संग यो समाप्त।
रेजरको साथ कपाल काट्ने
हामी शुरुवात मा उस्तै चरणहरु को पालन, कपाल गीला राख्दै। हामी राखेर सुरु गर्नेछौं टाउको नम्बर3मेशिन को र हामी कपाल काट्नेछौं तल बाट माथि, सम्पूर्ण टाउको वरिपरि। हामी अब माथिल्लो भाग छोड्नेछौं र त्यसपछि हामी पछि समाप्त हुनेछौं।
हामी राख्छौं टाउको नम्बर4माथिल्लो भाग संग पक्ष को क्षेत्र मा सामेल हुन, सधैं एकै आन्दोलन संग, तल बाट माथि सम्म। ठाउँ टाउको नम्बर2र सबै रूपरेखा, साथै sideburns र nape क्षेत्र मा जानुहोस्।
टाउको को शीर्ष यो कैंची संग काट्नु राम्रो छ, हामी कपाल को तारहरु लिन्छौं अघिल्लो चरणहरुमा जस्तै। हामी फ्रिन्ज क्षेत्र धेरै राम्रो गरेर समाप्त गरीनेछ सानो तिर्खा वा ट्रान्सभर्सल कटौती, एक कुल मलाशय को छाप दिन को लागी छैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: स्टाइलिश पुरुषहरू » व्यक्तिगत हेरचाह » केटाको कपाल कसरी काट्ने
प्रसिद्ध बाल्ड पुरुषहरू